LG malite a sexist ad mkpọsa na netwọk ọkụ | Gam akporosis
Mgbe mmadụ chere maka mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ mba dị iche iche, a na-ewere ya na ha nwere otu ndị ọkachamara nwere ike ịme ihe ebube na ngwaahịa ọ bụla ụlọ ọrụ ahụ na-ere. Ọ dị ka ọ bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị, na enwere oge mgbe ha na-agbada na ala, na nke a bụ ihe mere LG, otu n’ime ndị ọkpọ eletrik. Ma ọ bụ na ha abụwo ebe etiti nnukwu esemokwu ruo ọtụtụ ụbọchị mgbe ebipụtara otu n'ime ngwaọrụ ha kachasị ọhụrụ, ihe V60 ThinQ 5G.
O doro anya na ndị ahịa na-azụ ahịa na ngalaba Polish wepụtara echiche dị ebube nke mbipụta a vidiyo iji kwalite ngwaahịa na TikTok. Na nke a, ị nwere ike ịhụ otu okenye si ese foto nke nwanyị nwanyị mgbe ọ na-arịgo ụfọdụ steepụ. Nke a ghọtara, na iwe, na-eche ihu ma chọọ ịlele ekwentị. Nwoke ahụ na-azọrọ na ọ na-ewere onwe ya, ọ na-enyocha ya ma mgbe ọ hụrụ ọtụtụ foto ya, ọ rịọrọ ya mgbaghara, n'ikpeazụ, ọ ga-apụ na ọ ga-achọpụta na ọ bụ eziokwu. Na nkenke, ọ bụ ekwentị zuru oke maka onye rụrụ arụ ọ bụla chọrọ iwepụ foto na-ekwesịghị ekwesị n'ebe ahụ.
Oof, LG Poland ...
Nke a nwere ike ọ bụghị otu ịchọrọ ịre ahịa ngwaahịa gị.
Pressfọdụ pịa bụ ihe ọjọọ pịa.
PT Barnum ghaara gi ugha. pic.twitter.com/JEqaNLrvXr
Raj Raj Patel (@Rajio) Nwere ike 26, 2020
Nke a bụ mkpọsa LG iji kwalite LG V60 ThinQ nke gbanwere netwọkụ
N'ezie, a video ngwa ngwa malitere malitere ịrịa, na-enweta ọtụtụ nde nleta, ee, ọ bụghị n'ihi ọdịnaya dị mma ya. Ọtụtụ nde ndị ọrụ emeela mkpesa banyere ihe gbasara mmekọahụ doro anya nke vidiyo a. Ma, ọ dị ka onye na-ahụ maka vidiyo a nwere ike ịbụ onye ọrụ ọzọ nke netwọkụ mmekọrịta, onye mbịarambịa na LG, nke na-ewepụtakarị ọnọdụ nke nwoke meworo okenye na-enwe nsogbu. N'otu aka ahụ, ndị otu LG Poland Marketing nyere nkwado vidio ahụ.
Site na LG Poland ha rịọrọ mgbaghara n'ihu ọha, na n'ezie, ha emeela ya site na TikTok, na-ewepu vidiyo nke Discord. Ha na-ekwu na ndị otu ụlọ ọrụ azụmaahịa enyochaghị ya nke ọma. "Anyị na-arịọ mgbaghara maka mmejọ ọ bụla vidiyo a nwere ike ịkpata. Ọdịnaya nke vidiyo ahụ adabaghị na ụkpụrụ LG ma ọ bụ usoro nkwukọrịta ya. Ndị otu ahia na Poland akwadoghị ma ọ bụ nabata ya, ya mere ewepụla ya na ọwa anyị. Anyị ga arụ ọrụ ka ụdịrị ihe a ghara ime ọzọ na ọdịnihu”. Ọ ga-ezuru? O doro anya na ọ bụghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG bundles ya site na ya kacha ọhụrụ na sexist ad mkpọsa. Gbụ ahụ na-ere ọkụ!
Ngwa kacha mma akwụkwọ ahụaja maka gam akporo